The transperent crystal acrylic iko elu ọsọ ọnụ ụzọ China Manufacturer
Nkọwa:Ọpụpụ Dị Elu Na-agbanye Ọnụ Ụzọ,Okporo ụzọ ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe,Ọhụụ ọhụụ zuru ezu
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Dị Elu > Ọdịdị Aluminom Elu Elu Ọnụ Ụzọ > The transperent crystal acrylic iko elu ọsọ ọnụ ụzọ
Maka ihu igwe kachasị mma na-echekwa oghere ọnụ ụzọ nke nwere ngalaba nwere njikọ nke na-ejikọta ihe dị elu na-ekpuchi akụkụ nke ogologo nke panel ahụ. enwere ike ịmeghe ọnụ ụzọ ọhụụ na mpaghara ndị nwere ọnụ ọgụgụ isi. Ha na-enye okpomọkụ na mkpuchi mkpuchi ya na usoro ihe owuwu ya.
Site n'iji ọrụ dị elu na elu na-arụ ọrụ na nkà na ụzụ dị iche iche, Spiral Spiral bụ ngwa ngwa ma dị jụụ. N'elu ruo ala, obosara windo zuru ezu na-enye nchebe zuru oke na ihu igwe dị elu iji kwalite onyinyo dị egwu nke arụmọrụ.
N'ebe ọ bụla na ụlọ ọrụ nke na-esi n'akụkụ abụọ agafe, ụzọ doro anya site n'ọnụ ụzọ na-enye uru dị oke mkpa: A na-egbochi mberede ma mee ka ọrụ ụgbọ njem dị mma.
A na-edebe akwukwo akwukwo nke Hongfa n 'ebe di anya. Ekele maka ikuku na-erughị ala, transperent laths na-enye echiche dị mma site n'ọnụ ụzọ ruo ọtụtụ afọ - na-eyikarị ihe ọ bụla eyiri. Ya mere, ọnụ ụzọ ahụ dum kwenyere n'ụzọ zuru oke, ọbụna n'ọnọdụ nrụgide ọrụ kwa ụbọchị.
Metal agbatị ike aluminum elu ọsọ ọnụ ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
nnukwu ọsọ ọsọ na-agagharị n'ọnụ ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ụzọ dị elu na-arụ ọrụ na ígwè siri ike Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ụzọ dị elu nke na-agba ọsọ dị elu Kpọtụrụ ugbu a
Nchebe nchekwa na Hongfaa Aluminom Elu arụmọrụ dị elu ọnụ ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
ọnụ ụzọ dị ike ígwè Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ụzọ siri ike siri ike Kpọtụrụ ugbu a
Turtin High Speed ​​Roller Shutter Aluminum Door Kpọtụrụ ugbu a
Ọpụpụ Dị Elu Na-agbanye Ọnụ Ụzọ Okporo ụzọ ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe Ọhụụ ọhụụ zuru ezu Ọdịdị Dị Elu na-agbago n'Ọnụ Ụzọ Nnukwu Ọdịdị Dị Elu Na-emeghe Ọnụ Ụzọ PVC Ọpụpụ Elu Ọnụ Ụzọ Ọpụpụ Dị Elu Ọnụ Ụzọ Ámá Mkpuchi Nnukwu Ọdịdị Dị Elu Na-agbanwe Ọnụ Ahịa Ahịa